सखारै जब उनी उठ्दिनन् ! | Nagarik News - Nepal Republic Media
सखारै जब उनी उठ्दिनन् !
सखारै उनी उठ्दिनन्
घर कुम्भकर्ण निदाइरहन्छ !
उठेर झ्याल उघार्छु
तर, घरले आँखा उघार्दैन्
ढोका खोलेर कौसीमा उक्लन्छु
र, पनि घर हलचल गर्दैन
चकमन्नताको च्यादर ओढेर
बरु सपना सजाइरहन्छ शयनकक्ष
जुन बिहान सखारै उनी उठ्दिनन् !
चिर्बिराउँदै चारो टिप्न
कुनै साइत भरिँदैन पँधेरामा
छुइ भएझैँ गरी
अलक्कै बस्छ गग्रेटोमा गाग्रो
अल्छी मानेर फुल्छ
आँगनको डिलमा खुर्सानी फूल !
बरण्डामा बराल्लिन आउँदैन
शीतल पवनको झोँका
हुर्कन्छ यौटा दिन !
गुत्थिन्छ देउताको सम्झना
घण्टको रालोमा झुण्डेर अपहत्ते गर्छ
यौटा कर्णप्रिय गुञ्जनले
घरको पर्याय रहिछिन्
उनी सखारै उठ्दिनन्
सधैँ उनीसँगै उठेर फ-याकफुरुक गर्ने घर
अबेलासम्म सुतिरहन्छ !
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ०८:१९ शनिबार